मेस्सी, खेल नछोड ! - Shikshak Maasik
मेस्सी, खेल नछोड !
by • • आलोपालो • Comments (0) • 468
अमेरिकी महाद्वीपव्यापी फूटबल प्रतियोगिता ‘कोपा अमेरिका’ को फाइनल खेलमा चिलीको टीमसित हारेपछि प्रसिद्ध फूटबल खेलाडी लियोनेल मेस्सीले आफ्नो देश अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टीमबाट सन्न्यास घोषणा गरे—
“मैले सक्दो प्रयत्न गरेको थिएँ । यस पटक समेत चारवटा फाइनल खेल भए, मैले राष्ट्रिय टोलीबाट जित्न सबैले भन्दा धेरै चाहना राखेको थिएँ । तर दुर्भाग्य भयो, सकिएन । अब मेरा लागि र यस्तो होस् भन्ने चाहने सबैका लागि यो (राष्ट्रिय टीमबाट सन्न्यास लिनु) नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ । मैले अब राष्ट्रिय टीमबाट नखेल्ने निर्णय गरें ।”
मेस्सीको यो घोषणाबाट विश्वभर हलचल मच्चियो । उनलाई अर्जेन्टिनी राष्ट्रपति लगायतका धेरैले राष्ट्रिय टीम नछाड्न अनुरोध गरे । त्यसमध्येको सम्भवतः सबभन्दा मनछुने आग्रह थियो एकजना अर्जेन्टिनी शिक्षक योहाना फुक्सको । सामाजिक सञ्जालबाट संसारभर फिंजिएको त्यस चिठीमा फुक्सले लेखेकी छन्;
तिमीले यो पत्र नपढ्न पनि सक्छौ । तर एउटा फूटबल फ्यानका नाताले होइन, एकजना अर्जेन्टिनी शिक्षकका नाताले तिमीलाई म यो पत्र लेख्दैछु ।
म यो पत्र तिम्रो तारीफै तारीफले भर्न सक्छु । यस्तो लोकप्रिय खेलमा तिम्रो जादूमय प्रतिभा देखेर आफूलाई लाग्ने गौरवको बयान गर्न सक्छु । तिम्रो विश्वव्यापी लोकप्रियतामा भावविभोर हुन सक्छु । तर यहाँ त्यस्ता सबैले भनिआएका कुरा दोहोर्‍याएर फाइदा छैन । बरू म तिमीसित एउटा निकै मुश्किल, तिमीले अहिलेसम्म सामना गर्नु नपरेको खालको मद्दत माग्छु । म तिमीसित मेरा विद्यार्थीहरूको व्यवहारलाई आकार दिने जस्तो अप्ठ्यारो काममा सहयोग माग्छु, जुन विद्यार्थीहरू तिमीलाई फूटबलको हिरो र उदाहरणीय व्यक्तित्व मान्छन् ।
मैले आफ्नो काम जति राम्रोसित गरे पनि मेरा विद्यार्थीबाट तिमीले पाउने गर्ने जति स्नेह र सम्मान मैले उनीहरूबाट कहिल्यै पाउन सक्दिनँ । तर अहिले उनीहरू आफ्नो सबभन्दा ठूलो नायकले नै मैदान छाडेको देख्दैछन् । म तिमीसँग हात जोडेर भन्छु ‘मेस्सी ! आफू केही गर्न नसक्ने काम न काजका मान्छेको मात्र चित्त बुझने खालको यो काम नगर !’ अकर्मन्यहरू त त्यत्तिकै जे पायो त्यही बोलिदिन्छन्, किनभने बोल्नलाई पैसा लाग्दैन । म अर्काको कामलाई साह्रै सजिलो ठान्ने अर्जेन्टिनीहरूको छुच्चो बानीसित संघर्ष गरिरहेकी एक जना शिक्षकका नाताले तिमीलाई भन्दैछु, ‘कृपया, खेल नछाड !’ तिमीले यसरी खेल छाडेको देखेर मेरा विद्यार्थीले यो देशले पहिला हुने अथवा विजेताहरूलाई मात्र ध्यान दिंदोरहेछ भन्ने नबुझ्नु । मान्छे जीवनमा जति सफल भए पनि सधैंभरि अर्कालाई खुशी पारेर बस्नुपर्छ भन्ने नबुझ्नु !
म मेरा विद्यार्थीहरूसित मेस्सी राम्रो खेल्छ भन्ने खालका कुरा गर्दिनँ, बरू आफूले चिताएको कोणबाट, गोल्कीलाई झुक्याएर बल छिराउने अभ्यास गर्नका लागि उसले कति हजार पटक फ्रीकिक हान्यो होला भन्ने कुरा चाहिं गर्छु । म उनीहरूसित आफ्नो सपनाको पछि लाग्नका लागि कैयन् पीडादायी इन्जेक्सनहरू लगाउने मेस्सीको कुरा गर्छु । म उनीहरूलाई आफ्नो पैसा लगेर असहाय बालबालिकालाई मद्दत गर्ने मेस्सीको कुरा सुनाउँछु । म, ती सबैभन्दा महत्तवपूर्ण कुरा, असल बाबुको भूमिका निर्वाह गरिरहेको मेस्सीको कुरा गर्छु र त्यतिका गुण हुँदाहुँदै पनि मान्छेबाट गल्ती हुन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई बताउँछु ।
मेस्सी ! तिमी हाम्रो देशको रङको त्यो जर्सी नफुकाल । त्यो पहिरनमा तिमी नै अर्जेन्टिना जस्तो र हामीलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका जस्ता लाग्छौ । हामीलाई कप र मेडल मात्र चाहिएको होइन । प्लीज, मेरा विद्यार्थीलाई दोस्रो हुनु भनेको नराम्रो कुरा हो भन्ने नपारिदेऊ । म मेरा विद्यार्थीहरूले दराजभरि ट्रफी भरिएको मान्छे मात्र गतिलो हो र एउटा खेल हार्नु भनेको मान्छेको प्रतिष्ठा नै गुम्नु हो भन्ने नबुझ्नु भन्ने चाहन्छु ।
मेरा विद्यार्थीहरूले बुझनुपर्ने कुरा के हो भने कसैबाट कुनै कुराको आशा नराखी आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो काम गर्ने डाक्टर, सैनिक, शिक्षक, खेलाडीहरू नै हाम्रा हिरो हुन् । साँच्चैका हिरोहरूले बुझेका हुन्छन्, राम्रो कामले सधैं मूल्याङ्कन पाउँदैन । तर त्यसो भनेर उनीहरू काम गर्न छाड्दैनन् । उनीहरू प्रयत्न गर्न छाड्दैनन् । त्यसैले नै उनीहरू सफल हुन्छन् ।
अरू बलको कुरा गर्छन् । म तिम्रो हृदयको सम्बलको कुरा गर्छु ।
प्रस्तुति: केदार शर्मा